milina fametahana mandeha ho azy
milina fametahana tavoahangy
Boaty / Carton sy ny hafa Surface Labeling Machine
Masinina fametahana karatra / kitapo / kitapo
Masinina fametahana tsipika famokarana
Masinina fametahana misy marika fanontana
Famehezana Label Label Machine
milina famenoana mandeha ho azy
milina famenoana semi-automatique
Mitonona famehezana sy milina fanapahana
Machines Packaging hafa
F: Ianao ve no orinasa?
A: Mpanamboatra izahay any Dongguan, Shina.Specialized amin'ny milina fametahana sy ny indostrian'ny fonosana nandritra ny 10 taona mahery, manana tranga mpanjifa an'arivony, tongasoa amin'ny fisafoana orinasa.
F: Ahoana no hahazoana antoka fa tsara ny kalitaon'ny fametahanao?
A: Mampiasa rafitra mekanika matanjaka sy maharitra izahay ary kojakoja elektronika avo lenta toy ny Panasonic, Datasensor, SICK ... mba hahazoana antoka ny fahombiazan'ny fametahana marika. dia nahazo ny Sinoa "New High-Tech Enterprise" tamin'ny 2017.
F: Firy ny milina ananan'ny orinasanao?
A: Mamokatra milina fametahana adhesive manara-penitra sy namboarina manokana izahay.Amin'ny kilasy automatique, misy etikety semi automatique sy etikety mandeha ho azy;Amin'ny bikan'ny vokatra, misy mpanamboatra marika vokatra boribory, mpanamarika vokatra efamira, marika vokatra tsy ara-dalàna, sy ny sisa. Asehoy anay ny vokatrao, dia homena vahaolana mifanaraka amin'izany.
F: Inona ny fepetra momba ny fiantohana kalitao?
Fineco dia mampihatra hentitra ny andraikitry ny paositra,
1) Rehefa manamafy ny filaminana ianao, ny departemantan'ny famolavolana dia handefa ny famolavolana farany ho an'ny fanamafisana anao alohan'ny famokarana.
2) Ny mpamorona dia hanaraka ny departemanta fanodinana mba hahazoana antoka fa ny ampahany mekanika tsirairay dia voahodina tsara sy ara-potoana.
3) Rehefa vita ny ampahany rehetra, ny mpamorona dia mamindra ny andraikiny amin'ny Departemantan'ny fivoriambe, izay mila manangona ny fitaovana ara-potoana.
4) Nafindra any amin'ny Departemantan'ny fanitsiana miaraka amin'ny milina mivondrona ny andraikitra.
5) Aorian'ny fijerena horonan-tsarimihetsika / fisafoana orinasa, ny varotra dia handamina ny fandefasana.
6) Raha manana olana ny mpanjifa mandritra ny fampiharana, ny varotra dia hanontany ny Departemantan'ny varotra aorian'ny famahana izany miaraka.
F: Fitsipiky ny tsiambaratelo
A: Hotazoninay ao amin'ny arisivantsika ny famolavolana, ny Logo ary ny santionan'ny mpanjifantsika rehetra, ary tsy aseho amin'ireo mpanjifa mitovy aminy mihitsy.
F: Misy torolàlana fametrahana ve aorian'ny nahazoanay ny milina?
A: Amin'ny ankapobeny dia azonao atao ny mampihatra ny labeler mivantana rehefa mahazo izany, satria efa namboarinay tsara tamin'ny santionany na vokatra mitovy amin'izany. Ankoatra izany, dia homena boky fampianarana sy horonan-tsary.
F: Inona no fitaovana etikety ampiasain'ny milinanao?
F: Karazana milina inona no mahafeno ny fepetra takiako?
A: Pls omeo ny vokatrao sy ny haben'ny mari-pamantarana (sarin'ny santionany misy marika dia tena manampy), avy eo dia soso-kevitra mifanaraka amin'izany.
F: Misy fiantohana miantoka ve aho fa hahazo ny milina sahaza ny vola aloako?
A: Izahay dia mpamatsy fanamarinana eny an-toerana avy amin'ny Alibaba.Ny Trade Assurance dia manome fiarovana amin'ny kalitao, fiarovana amin'ny fandefasana ara-potoana ary fiarovana 100% azo antoka.
F: Ahoana no ahafahako mahazo ny fitehirizana ny milina?
A: Ny kojakoja simba tsy artifisialy dia halefa maimaim-poana ary maimaim-poana mandritra ny fiantohana 1 taona.
Adiresy: No. 15, Làlana Xingsan, Wusha, Tanànan'i Chang'An, Tanànan'i Dongguan, Faritanin'i Guangdong